Fasana Gunung Kawi, Bali, Indonezia " Journey-Assist - mahaliana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Gunung Kawi
Gunung Kawi (Pura Gunung Kawi, na Tempolin'i Gunung Kawi). Temple
Ny Gunung Kawi (Pura Gunung Kawi, na ny Tempolin'i Gunung Kawi) dia fitambaran'ny fasana mpanjaka 10 izay voasokitra ao anaty vatolampy. Noho izany, dia nropropolis tena tsy mahazatra. Ny toerana misy azy dia azo antsoina hoe hafahafa ihany koa. Ireo fasana ireo dia miorina amin'ny lohasaha lehibe. Raha hidina ao dia mila mandresy ireo dingana 371 ianao.
Gunung Kawi dia tempolin'ny taonjato faha-11 sy toerana fandevenana any Tampaksiring, avaratra atsinanan'i Ubud. Eo amin'ny lafiny roa amin'ny renirano Pakerisan no misy azy. Ahitana fasana voapaika vato 10 izay voasokitra ao anaty vatom-pialokalofana mirefy 7 metatra eo amin'ny hantsam-bato.
Ny rivotra iainan'ny toerana
Na dia fasana aza ireo dia tsy manjombona loatra ity toerana ity. Mifanohitra amin'izany. Izy io dia voahodidina tanimbary fantsom-bary, hantsana misy voan-kafanamboa izay ahantonana ny mpamonosona, ary mpimonomonona eo akaikiny. Azo inoana fa noho io antony io, ny kompania Mount Kawi dia nahazo anarana feno fitiavan-tanindrazana toy ny Lohasahan'ny Mpanjaka sy ny Tendrombohitra Poeta. Ny haavon'ny fasana dia imbetsaka kokoa noho ny fitomboan'ny olombelona.
Azonao atao ny miala amin'ny zava-drehetra, mijoro eo akaikin'ny hadilanana goavambe ao anaty vatolampy. Satria tempoly ity misy ny fombafomba ara-pivavahana sy fotoam-pivavahana mbola tokony hatao, dia mila manao sarona ianao.
Afaka mivezivezy lava eto ianao: avy amin'ireo sokatra ireo, mankamin'ny lava-bato maromaro (mba hidiranao any dia mila manala ny kiraronao ianao, satria misy fombafomba masina atao any), avy eo mankany amin'ny alitara kely misy fanolorana sorona ho an'ireo andriamanitra (mofom-bary toy ny habe sy endriny rehetra, ary koa harona misy voninkazo), izay omanin'ny vehivavy eo an-toerana avy hatrany. Amin'ny ankapobeny, omena anao ny fiampangana ny herin'ny mistika. Na izany aza, aza adino ny miverina miakatra amin'ny tohatra. Hitsapa ny fanahinao sy ny tanjanao io.
Misokatra isan'andro ny fidirana manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 18 hariva. 15 rupees ny fidirana ho an'ny lehibe ary 000 7 rupees ho an'ny ankizy.
Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka. Azonao atao ny mividy fitsangatsanganana amin'i Gunung Kavi, na afaka mandeha irery amin'ny alàlan'ny fiarakaretsaka na amin'ny fitaterana manofa.
adiresy: Banjar Penaka, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali 80552, Indonezia
Tapakila fidirana ho an'ny ankizy (manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 11 fahavaratra) -35 rupees
Ankizy latsaky ny 2 taona - afaka
Gunung Kawi (Pura Gunung Kawi, na Gunung Kawi Temple)
Misy tsena iray manontolo eo amin'ny fidirana amin'ny Gunung Kawi
Natiora manodidina an'i Gunung Kawi
Tendrombohitra Gunung Kavi amin'ny sari-tany
Gunung Kawi amin'ny sarintany
Betsaka kokoa ny toerana eto noho ny fantatry ny mpizahatany amin'ny fomba ofisialy.
nirenireny avy tany aoriana izahay nankany amin'ity faritra iva ity .. ary adiny iray teo ho eo no nirenireny teny an-tanimbary, teny an'ala.
Toerana tena mahafinaritra - omeko anao!
ary manoro hevitra aho ny hametraka fotoana bebe kokoa, .. satria misy ny toerana handehanana.